Njengoba ukwaziwa kwaleli gama salolu shicilelo, ukulungiswa okuzoxoxwa iyi-ejenti elwa namagciwane. Cabanga izakhiwo "furatsilina" futhi indlela elisebenza ngayo. Lo mkhiqizo zokwelapha kumele bazi ngazo zonke ekhaya. Muva nje, okuningi kwemithi emisha elwa namagciwane, kodwa kwake kwaba nesikhathi lapho "Furatsilinom" ingatholakala kuzo zonke nekhabethe lemithi: emikhayeni, ezimotweni, e amafektri.
It is kabanzi ikhambi e imithi ezempi. Kufanele kuqashelwe ukuthi imfuyo asebenzayo, oyingxenye ye "furatsilina" - nitrofurazone, inikeza ukusebenza okuhle zomuthi. Ngaphandle nitrofural (nitrofurazone) ngaphakathi ithebhulethi idatha, njengoba izinto elisizayo, equkethwe sodium chloride, futhi lokhu okulandelayo: stearic acid, povidone kanye sodium croscarmellose.
Lekartstvennymi yakha ejenti elwa namagciwane "Furatsilinom" imfundo manual ubiza 0.2% amafutha, isixazululo utshwala, amaphilisi. Ngokusekelwe kulezi amaphilisi ulungisiwe njengomlobokazi izixazululo aqueous ukuze kusebenza nakwesinye isimo zangaphandle. Kulesi iphilisi elilodwa "furatsilina" enkomishini yamanzi abilayo. Uphuzwe kwezinye izimo ngaphakathi. Umuthi kuyinto zokwenziwa.
Ngisiphi isiqhema pharmacotherapeutic libhekisela Furatsilinom? Yokusetshenziswa uyalandisa yona antiseptics, izibulali-magciwane spectrum ezibanzi. Lokhu ejenti elwa namagciwane iyasebenza ngokumelene nezilwanyana ezincane igremu-HIV. "Furatsilinom" iyasebenza emelene uhudo kanye E. coli, le neparatyphoid ebangelwa lwegciwane, streptococci futhi staphylococci. It has an nomthelela-ejenti igesi esibhibhayo, salmonella.
Izindlela zika senzo isixazululo okulungiselelwe kusuka amaphilisi "Furatsilinom" imfundo manual ubiza azisafani nezinye imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali ejenti. Ngo isicelo yayo kancane Amagciwane ziba namandla okumelana umenzeli. Ngaphezu kwalokho, ngisho nokuthuthukisa, yokumelana 'Furacilinum "awufiki ngezinga sezingeni eliphezulu.
Ukwazisa mayelana izinkomba ukuthola imithi "Furatsilinom" imfundo manual uncoma ke njengenhlangano agent zangaphandle ukwelapha pathologies ezilandelayo:
ukusha idigri obuhlukahlukene;
conjunctivitis, blepharitis (eyewash);
kanye nabezindaba acute otitis;
Kule minyaka amacala amathathu ukususa iyiphi indawo emlonyeni nasemphinjeni. Futhi isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko e isixazululo ekwelapheni amathumba, ikakhulukazi ulcer meatus sokuzwa. Furacilinum wageza ingaphakathi pleural, isetshenziswa ekwelapheni osteomyelitis futhi empyema sinuses paranasal ihlelwe ngokulandelana kwezihloko.
Umuthi kunomphumela magciwane ekwelapheni ukusikeka uqhekeke, imihuzuko, nezinye umonakalo isikhumba non-sina. Ngo uhudo, "Furatsilinom" yokusetshenziswa Kunconywa, ezithathwe ngomlomo. Kuyinto uhlobo okukhulu uhudo virus. Khona-ke ngaso leso sikhathi izibhebhe amiswa ukuba kahlanu ngosuku olulodwa. Kanjalo kumelwe lizwakale ngokwanele ukugeza phansi (kufika ku isigamu ilitha) yamanzi.
Imiphumela engemihle uma usebenzisa izidakamizwa "Furatsilinom": Yokusetshenziswa ukhuluma kungenzeka yokungezwani komzimba - ukulunywa, ububomvu kwesikhumba.
Ukusetshenziselwa yangaphakathi amaphilisi ezimweni ezingajwayelekile babonakala ukungasebenzi wokugaya ukudla, umsebenzi ipheshana wokugaya ukudla. ukulahlekelwa Kubhekiwe ukudla, ukucobeka, isiyezi. Ngo mouthwashes, nomphimbo, ngala manzi, kwezinye izimo kukhona ukungakhululeki elihlobene ne-ukucasuka lwamafinyila futhi kumzwise ngisho nobuhlungu.
Hypersensitivity ukulungiswa kuyinto contraindication ukusebenzisa kwayo zonke izinhlobo!
IzAga mayelana zonyaka: entwasahlobo, ehlobo, ekwindla nasebusika